ISundowns isisayine umshana ka-‘Shakes’ | isiZulu
ISundowns isisayine umshana ka-‘Shakes’
Angase angadlali oweSundowns egcina izinto zebandla lakwaShembe
Cape Town – IMamelodi Sundowns isisayine uThando Ngwenya, umshana walowo owayengumdlali wasesiswini wamaBrizilians, uManqoba “Shakes” Ngwenya, ngokuthola kweKickOff.com.
UThando, oneminyaka engu-12 ubudala usesayinwe ezinhlakeni zokuthuthukiswa kwabadlali abancane kwiSundowns kanti, ngokusho kukababa wakhe omdala, lo mdlali osemncane unekhono elifana ncamashi nelalowo obengumdlali wamaBrazilians nosanda kuhlukana nawo, uTeko Modise.
UNgwenya waba nempumelelo ngesikhathi esagijima eChloorkop ngemuva kokuchitha iminyaka engu-8 nale kilabhu nalapho awina khona izicoco ezimbili zeligi.
OLUNYE UDABA: Iqembu laphesheya liqinisekise ukusayina umdlali weBafana
UNgwenya, nobemenywe ukuba azodlala emidlalweni yeSiyabonga Sangweni Festival Mayoral Sports Day nobekudlala kuyo abadlali asebathatha umhlalaphansi ngempelasonto, uthi indodana kamfowabo inethalente futhi inekhono elifanayo nelika-‘General’.
“Indodana kamfowethu, uThando Ngwenya, usesayine nohlaka lokuthuthukiswa kwabadlali kuSundowns manje,” uNgwenya utshele iKickOff.com.
“Uyawubona umqondo webhola futhi uyawubona umehluko phakathi kwakhe nomdlali wePSL odlalayo manje ongenawo umqondo anawo, lokho kuyakhombisa ukuthi angadlala ezingeni eliphezulu ngenxa yendlela acabanga ngayo.
“Angikhulumi ngezinto azenzayo, amandla kukhona noma ikhono, kodwa indlela acabanga ngayo.
“Uma ngabe ibhola lifika kuyena uyabona ukuthi uvele useyazi ukuthi ibhola liyaphi,” kusho lo mdlali owayedlala esiswini kuBidvest Wits, egcizelela ngokuthi akangabanzi ukuthi umshana wakhe uzoba nekusasa eliqhakazile.